Daawo muuqaalka: Xisbiga Wadani Oo ka mid ah xisbiyada ka dhisan Hargeysa oo Go’aankii madaxweynaha maamulka Somaliland Ku Tilmaamay Dhabar Jab Siyaasadeed |
Daawo muuqaalka: Xisbiga Wadani Oo ka mid ah xisbiyada ka dhisan Hargeysa oo Go’aankii madaxweynaha maamulka Somaliland Ku Tilmaamay Dhabar Jab Siyaasadeed
Xisbiyada mucaaradk ah ee maamulka Somaliland ayaa dareemo kala gadisan ka bixiyay hadalki dhawaan ka soo yeeray maxweynaha maamulka Somaliland ee ahaa inaanay ka qeybgaleynin shirka dhawaan lagu wado inuu ka dhacao magaalada London ee dalka UK kaasi oo lau doonaayo in lagu mideeyo qeybaha kala gadisan ee Soomaaliya.
Afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee Wadani Md Ibraahim Mahdi Buubaa ayaa sheegay inay xisbi ahaan aanay taageersanayn go’aanka uu madaxweynaha maamulka Somaliland dib ugaga noqday ka qayb galka shirka London.
Ibraahim Mahdi Buubaab oo maanta la hadlaayey saxaafada ayaa si adag u naqdiyey hadalka madaxweynaha, isaga oo sheegay inuu ku deg degahay go’aankaas. Waxaanu intaas ku daray in madaxweynaha looga fadhiyey hir galinta shirkii qaran ee lagu baaqay. Waxaana ka mid ahaa hadalkiisii.
Dhanka kalena Xisbiga Ucid ayaa sheegay inay si buuxdo u soo dhaweynaayaan hadalkii hogaamiyaha maamulka Somaliland uu ku qaadacay shirka London ay si weyn u soo dhaweynaayaan asiga oo maamulka Somaliland ugu baaqay inay dhamaanba diidaan wadahadalada la doonaayo in Somaliland ay layeelato Dowlada federaalka ah ee Soomaaliya.
Aragtida kala duwan ee ay ka muujiyeen xisbiyada mucaaridka maamulka Somaliland hadalka madaxweynaha ee ku wajahan go’aanka uu maamulkooda ka qaadatay shirka London ayaa ku soo beegmaysa xili la wada sugaayey in talo qaran lagaga tashado siyaasada lagu waajihi doono ka qayb galka shirkaasi.
Halkaan hoose ka daawo sida ay u hadleen xisbiyada mucaaradka ee maamulka Somaliland